Cationic polyester - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Cationic dyeable polyester, aha kemịkal: polybutylene terephthalate (na-agbanwe agbanwe); Aha Bekee: cationic polyester gbara agba; mwepu: PBT, ejikwa ya na CD ụlọ ọrụ. Cationic polyester bụ nke denatured / gbanwetụrụ polyester na enwere ike iji ntutu cationic mee ya. 110 C.
Mmegharị nke Cationic Polyester Fiber
A na-agbanwe polyester Cationic nke ga-agbanwe ya ngwa ngwa site na coyelymerization nke polyester ihe mgbanwe igwe, dika dimethyl isophthalate-5-sodium sulfonate (a na-akpọkarị trimer, SIPM asụsụ Bekee) ya na polyester. A na-ewebata Sulfonic acid otu n'ime sịnịma polyester mgbe copolymerization gasịrị, nke enwere ike iji udiri cationic mee ya. Akwa a na-eji akwa nwere agba dị mma, oke iyuzu oke, na -ebelata mkpochapu nke obibi akwụkwọ na ihichapu mmiri mmiri, na copolyester. Chips nwekwara ike ịmụba ọgwụ antistatic, Ngwongwo mmiri na mmiri ịnabata mmiri, nke bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji melite Njirimara nke nsị nke polyester n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe ngwakọta nke 4 cationic nke ihe nhicha nke polyesters nke nwere nkeji ano na ano ihe ndi ozo 1 igbochi copolymer nke ethylene glycol / polyethylene glycol / sulfonated sodium isophthalate / terephthalic acid nke Yonigika Companylọ ọrụ Japan nwere ike mepụta akwara ultrafine na omimi nke dị elu.. A na-agbakwunye onye na-emegharị Cationic na obere ihe nrụnye na BHET tupu ma ọ bụ n'oge ịgba. Acid Hydroxyethyl) Copolymerization. Spinnability nke copolymers na-aka mma mgbe emechara ha n'usoro copolymers na-enweghị usoro. Polyester gbanwetụrụ ọ bụghị naanị na ejiri cationic jiri ya, mana ọ nwere akụ na - egbochi ihe na gbakee agbake.
Ngwongwo Cateic Polyester
Isi agbaze nke polyester cationic nke SIPM copolymerization mebere karịa nke polyester nkịtị., na mkpu ya dị ala karịa nke polyester nkịtị, nke a na - eme ka nsị nsị nsị na - arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka eriri gị dị mfe ijiji, na - eme ka ihe ndị dị mma na -eziwanye ma na-eme ka hygroscopicity dịkwuo mma.
Igha mo ahu, kristal na ike nke cationic polyester fibers dị ala karịa nke eriri polyester nkịtị, na nguzogide pure nke akwa cationic polyester di nma karie nke eriri polyester. Thedị nwatakịrị nke cationic polyester dị 10% ~ 30% dị ala karịa nke polyester nkịtị., ya mere akwa cateiki polyester dịkwa nro karịa nke polyester nkịtị.
Na mgbakwunye, ọnụego alkaline hydrolysis nke cationic polyester dị ngwa ngwa karịa nke polyester nkịtị. Ya mere, mbelata alkali nke akwa cationic polyester dị elu karịa nke uwe polyester nkịtị na otu okpomọkụ.
Cationic polyester abụghị naanị na-ekwe nkwa ịdị mma nke cationic, ma ọ na-abawanye micropore nke eriri, ọ na-eme ka mmịkọ ahụ dị mma, ngwangwa na nnabata nke mmiri, si otú a na-emekwu ka ịmegharị ụcha nke eriri polyester; site na ịme anwansị, na ákwà ike juu, breathable, ala, antistatic, dyeable na ụlọ okpomọkụ na ikuku mgbali; site cationic mgbanwe, na multi-ọtọ ajị eṅomi nwere ike ime ka ndị na-akpa ákwà soft, antistatic na dyeable. Anti-Pilling, ngalaba-dyeing na ajị anụ na ụlọ okpomọkụ na nsogbu.
Akwa mere nke cationic gbanwetụrụ emep uta eri nwere ndị na-esonụ e ji mara mgbe e sijiri na cationic dyes:
1. Bright ụda, ezi miri dyeing;
3. Good ìhè fastness na-aṅacha fastness;
4. Ndakọrịta nke e ji esiji ákwà dị mma mgbe dyeing na agba Nchikota.
5. Na elu okpomọkụ dyeing bath, nke kwụsiri ike dị mma.
6. Ọ nwere obere ofufe ọzọ esiwọrọ, tinyere nkịtị polyester esiwọrọ.
7. The mgbasa ọnụego na emep uta eri bụ ngwa ngwa na e nweghị mgbanaka dyeing onu.
8. Mgbe onye Onyenwe anyị + uru mgbanwe na dyeing bath, ndị e ji esiji ákwà nwere elu kwụsie ike.
Cationic gbanwetụrụ polyester filament na polyester filament ike ike oké, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe dị iche, ị pụrụ nanị iji dyeing usoro! Cationic ngwaọrụ bụ n'ozuzu ọchịchịrị!
Ndị na-esonụ foto na-egosi ihe dị iche cations na kenkowaputa polyester esiwọrọ. N'ezie, ọ bụ nnọọ ike ịmata ihe dị iche na gba ọtọ anya.
Cationic akwa bụ cationic yarns na pụrụ iche ọgwụgwọ, dị ka cationic polyester yarn ma ọ bụ cationic naịlọn yarn.
Otu n'ime ihe ndị e ji mara cationic akwa bụ abụọ-agba mmetụta, nke ike-eji dochie agba-kpara abụọ-agba akwa iji belata na-eri nke akwa. Nke a bụ ihe e ji mara nke cationic akwa, ma ọ na-egbochi e ji mara ya. Na ihu nke multi-agba akwa, cationic akwa nwere ike na-anọchi cationic akwa.
Cationic akwa nwere na-egbuke egbuke na agba na ndị kwesịrị ekwesị maka dị ka wuru esiwọrọ, ma ha nwere ogbenye agba fastness ìhè na saa nke eke cellulose na protein akwa.
The eyi ndị na-eguzogide nke cationic akwa a dịkwa mma. Mgbe agbakwunye ụfọdụ wuru emep uta eri ndị dị otú ahụ dị ka polyester na spandex, ike na ekwedo nke cationic akwa dị elu, na-eyi ndị na-eguzogide nke cationic akwa bụ nke abụọ naanị naịlọn.
Cationic akwa nwere ụfọdụ chemical Njirimara, dị ka corrosion eguzogide, alkali eguzogide, bleaching eguzogide, oxidants, hydrocarbons, ketones, mmanụ ala na ngwaahịa na inorganic asịd, nakwa dị ka anụ ahụ ụfọdụ Njirimara, dị ka ultraviolet eguzogide.
isi mmalite: Encyclopedia of Chemical Fibers, Baidu Library, Akpata na Control nke Dyeable Cationic polyester mkpumkpu Dyeing, site Wu Danfeng
Nhazi Dr. Sai Shangfang Bu
Anapụtala ngwongwo ahụ ugboro abụọ n’usoro n’izu a. Daalụ ndị ọrụ ibe m.